ODUU AMMEE: HIDHAMTOONNI SIYAASAA LAGANNAA NYAATAA EEGALAN | OROMOTV
Jawar faa lagannaa nyaataa eegalan
Akka maddeen Gabaasanitti Jawar dhukkubbiin ilkaanii waan haala malee itti jabaatee hirriibaa fi nyaatas dadhabsiiseef yaala gaafatee dhoorgan. Kan akka Jawar hin yaalamne kallattiin ajaja kenne Abiy tahuus qabatamaan mirkaneeffannee jirra. Waan nama dhibu halkan mana yaalaa si geessina jedhaniin. Jawaaris halkan deemuu dide. Osoo guyyaan jiruu maaliif halkan mana yaalaa geessuun filatame? Shira tolfametu jira jechuudha.
Sababa kanaan Jawar faa yeroo ammaa lagannaa nyaataa eegalanii jiru. Kan lagannaa irra jiran Jawar, obbo Baqqalaa, Hamzaa Booranaa, Shamsaddiin Xaahaa, Boonaa Tibbilee fi Geetuu dha. Gaafiin isaanii Jawar yaala akka argatudha.
Kan kallattiin ajajee akka Jawar hin yaalamne dhoorge Abiyyi waan taheef dhimmi kun dhimma mana murtiitti ilaalamuu danda’uu miti. Humna mana murtii oli.
Jawar lagannaa guyyaa 40 geggeessaa turaniin baay’ee miidhamee kan ture yoo ta’u qaamni isaa humna dhabee kan baay’ee laafedha. Kanarratti nama miidhaan duraatuu irra jiru sababa dhukkubbii ilkaaniitiif nyaata nyaachuun erga itti ulfaatee bubbuleera. Kanatu akka daran miidhamu taasise. Ilkaan erga dhukkubuu eegalee yaalas gaafachuu eegalee bubbulee jira.
Ummatni Oromoo nama jabaa isaa kana yaalchifachuutu irra jira.